Ihe omimi nke Google PageRank edozi | Martech Zone
Ihe omimi nke Google PageRank edozi
Naanị maka ị maara ya, n'abalị a, enyochare m Google Pagerank ọzọ na PopuriN'aka na ọ bụ nnukwu ọgazị akwa. Efu. Zilch. Nada. N'ihi ịmata ihe, m banyere http: //www.dknewmedia.com kama http: //martech.zone… na voila! N'ebe ahụ ka ọ dị na ebube ya niile! PageRank = 3 na 1,050 backlinks na saịtị m.
Nke a bụụrụ m obere ihe ijuanya n'ihi na m debanyere aha (n'efu) na Njikwa Nchọta Google ma tọọ ngalaba mbụ m na www, ọ bụghị na-enweghị ya. Yabụ na amaghị m ihe kpatara ya ọbụnadị ebe ahụ.
Ya mere… Emere m ihe ole na ole n'abalị a iji gbalịa hụ na enwere m agbanwe agbanwe n'ụzọ niile a na-akpọ ngalaba m n'ime ụlọ m:
M kpochapụrụ mmasị m na Google Webmaster wee nyefee ya na ngalaba m bụ isi kwesịrị iji www.
M debere faịlụ m htaccess iji nyegharịa arịrịọ ọ bụla site na http://dknewmedia.com ka http://martech.zone. Jide n'aka dezie faịlụ gị .htaccess dị ugbu a ma ọ bụrụ na ọ dị (enwere ike zoo ya n'aka onye ahịa FTP gị):
dknewmedia.com $ [NC]
Emere m nyocha ma dochie na MySQL iji hụ na a na-akpọ ngalaba m mgbe niile na www. Emelitere m tebụl posts m na tebụl m kwuru (maka URL):
Melite 'wp_posts` setịpụrụ' post_content` = dochie ('post_content`,' http: //dknewmedia.com','http: //martech.zone ')
Ikekwe nke a bụ igbu oge, mana echere m na ọ gaghị emerụ ihe ọ bụla ahụ. Echiche ọ bụla sitere na ndị ọkachamara SEO anyị nọ ebe ahụ?
Ndị ndụmọdụ, ndị ọrụ ngo na ndị ọrụ: Ebee ka anyị na-aga?
Akwụsịrị m Akaụntụ M Basecamp Taa
Ọ bụghị igbu oge ma ọlị. Google na-ahụ ngalaba ọ bụla dị ka saịtị dị iche ma si otú a na-ekewa PR gị n'etiti ha abụọ. Echeghị m na ntọala webmasters gị metụtara - ọ bụ maka mmadụ ole na-ejikọ ngalaba ọ bụla.
You wepụrụ faịlụ .htaccess? Ọ dị ka ọ naghị arụ ọrụ ugbu a.
BTW, Echere m na akara ikpeazụ kwesịrị:
enweghị slash tupu $ 1. Nke ahụ bụ n'ihi na regex na akara ahịrị gara aga ga-adaba na mbadamba azụ na-adọkpụ, ị ga-ejedebe ịnweta slashes abụọ na redirect.
Nzọụkwụ ndị ị mere bụ ndị ziri ezi ọ bụ ezie na redirere gị anaghị arụ ọrụ n'oge a.
Otu ihe m ga - ajụ bụ gịnị kpatara ị jiri họrọ nsụgharị www? Enweghị ihe ọ bụla kachasị mma nke URLs gụnyere www. Na Google na-egosi mmasị ya maka ụdị na-abụghị www nwere ike ịga na nke ahụ. N'ezie, ọ ga-amasị m ịmara ihe mere Google ji enwe mmasị na nke na-abụghị www tupu ịme mkpebi otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ.
Ndewo SEO Guy!
Nhọrọ mbụ m gbanwere ihe niile https://dknewmedia.com/; Otú ọ dị, ọ dị ka ọ na-ebibi WordPress Permalinks - ọbụlagodi ọ gbanwere ntọala WP maka ngalaba ahụ.
Agbalịrị m ịgbanwe ihe niile n'ụzọ ọzọ - http://www.dknewmedia.com mana jiri faịlụ htaccess ọ mebiri permalinks ọzọ, agbanyeghị na njikọ ahụ zuru oke. Tinye redirect - ọ mebiri ya, wepu redirect na ọ rụọ ọrụ. Dị egwu .. n'ihi na URLs agbanweghị n'ezie.
Ya mere - Enwere m mgbagwoju anya ma weghachite ya otu ọ dị ruo mgbe m ga-achọpụta ihe na-eme. Obi dị m ụtọ ịnụ ihe ị na-ewere na ihe mere Google ji enwe mmasị n'ụdị na-abụghị www… Enwere m mgbagwoju anya!
Daalụ maka mod_rewrite-fu. Ime otu ihe ahụ na blog m n'abalị ụnyaahụ mgbe m gụsịrị ya.
Aghaghị m ịgbanwe ya. Ọ ghagburu m permalinks. Enweghị m echiche kpatara ya… ọ bụ echiche dị mma - mana arụghị ọrụ. 🙁
Hụ ma ngwa mgbakwunye a enyere gị aka 🙂
M nwetara ya na-arụ ọrụ! Woohoo. M na-emelite post. Daalụ maka enyemaka niile onye ọ bụla!
Kedu ihe mgbanwe si na ọkwa mbụ?
Mgbe m bugoro htaccess, amataghị m na m dere ihe ederede htaccess dị ugbu a nke WordPress written ya mere ntụgharị ọrụ ahụ rụrụ ọrụ, mana URLs emeghị eme. Oops! Enwere m ike ịta ụta maka ngwanrọ FTP m zoro faịlụ ahụ ma dọọghị m aka ntị ka m degharịa ya. 🙂
Achọrọ m n'ezie / $ 1. Na-enweghị ya, ọ dịghị slash soro na ngalaba. Enwekwara m nzuzu na www.
Ugbu a, m na-arụ ọrụ na ndepụta redirect ka Feedburner! Ihe ọchị!
Gbanwee na Blogger; -0
Mee 16, 2007 na 1: 32 PM
Enyochare m peeji akwụkwọ m na-enweghị www ma nye ya otu nsonaazụ ahụ, yabụ echeghị na weebụsaịtị m na-ata ahụhụ nkewa! Echere m na nke ahụ bụ ihe dị mma. Ọ bụrụ na m na-eme ọchụchọ na Google maka posts m, ha niile na-alaghachi na-enweghị www.
Echere m na m ga-ahapụ ihe ka ha dị. Dabbling nwere ike ịbụ ihe dị ize ndụ 🙂
Jun 26, 2008 na 7:08 AM
M na-na-enwe ụfọdụ redirection nsogbu… m na-agbalị redirect http://www.servicedecalculatoare.com.ro na http://www.ctromania.ro mana odi ka ihe obula m mere, sava ahu agaghi emeghari m. M; veyed na .htaccess faịlụ redirect na a php akwukwọ, ma ọ dịghị ihe. gini ka i nātu aro?
hapụzie, emere m ya! Ekele na agbanyeghị